Windows inoshanda sisitimu inotsigira akawanda monitors kunze kwebhokisi. Iwe unongoda kuzviita batanidza kunze kwekuongorora(s), dzvanya iyo Windows logo + P makiyi, wobva wasarudza izvo zviripo zvekutanga kuti utange kushandisa yekunze yekutarisa (s) seyako yekutanga kana kuwedzerwa kuratidzwa.
Ndichiri kuyedza kuratidza kune wechipiri mutariri, mu Windows 10, iwe unogona kuwana "PC yako haigone kuratidza kune imwe skrini. Edza kumisazve mutyairi kana kushandisa rakasiyana vhidhiyo kadhi". Iko kukanganisa kunoratidzika kana iwe ukadzvanya iyo Windows logo + P makiyi ekuvhura iyo Project pane. Iyo Project pane inoratidza iko pamusoro iko kukanganisa uye haina kuratidza fungidziro sarudzo dzawaizoona neimwe nzira.
Kazhinji, iko kukanganisa kunoratidzika kana iwe ukaedza kushandisa yako yekunze kana yechipiri yekutarisa kana uchinge waisa patsva Windows 10 nekuda kwekushomeka kweanodiwa madhiraivha edhizaini.
Sezvo "PC yako haigone kuratidza kune imwe skrini. Edza kudzoreredza mutyairi kana kushandisa rakasiyana vhidhiyo kadhi ”kukanganisa kunoratidza, iko kukanganisa kunowoneka kana vhidhiyo chaiyo kana giraidhi kadhi mutyairi isina kuiswa pane yako Windows 10 PC. Iko kukanganisa kunogona zvakare kuratidza kumusoro muchiitiko cheakaora giraidhi mutyairi kana giraidhi kadhi.
Kana iwe uri kuwana iko kukanganisa, edza zvinotevera mhinduro kuitira kuti ugadzirise iko kukanganisa uye purojekiti kune yako yekunze kana yechipiri yekutarisa.
Solution 1 ye4
Nemaoko gadzira iyo giraidhi mutyairi
Kana iwe uine nguva kana usingakwanise kumirira Windows 10 Kuti utore kurodha pasi otomatiki uye nekuisa madhiraivha edhizaini, unogona kushanyira webhusaiti yako yePC kugadzira uye kurodha pasi vhidhiyo / giraidhi mutyairi uye unomhanyisa iyo yekumisikidza kuti iise zvakafanana.
Solution 2 ye4
Regai Windows 10 download uye dzishandise Graphics mutyairi iwe
Nguva pfupi mushure mekuisa kana kudzoreredza Windows 10, kana PC yako yakabatana neinternet yekubatanidza, ese anodikanwa madhiraivha edhizaini anozotorwa otomatiki oiswa kuburikidza Windows Kwidziridza. Sezvo Windows 10 inodhanilodha nekuisa makumi emadhiraivha echishandiso, izvi zvinogona kutora nguva zvichienderana neyako internet yekubatanidza kumhanya. Kana iwe usina chokwadi nezve yako PC modhi uye giraidhi mutyairi anodikanwa kune yako PC, zvakanaka kurega Windows 10 ndikuitire basa racho.
Unogona kuenda ku Windows 10 Zvirongwa> Kwidziridzo & Chengetedzo> Windows Gadziridza peji uye wobva wadzvanya pa Tarisa kuvandudza bhatani kana Windows 10 haisati yatanga kudhawunirodha nekuisa madhiraivhoni echishandiso otomatiki.
Solution 3 ye4
Dzorerazve giraidhi mutyairi
Kana iko kukanganisa kuri kuratidza kumusoro nekuda kweakaora giraidhi mutyairi, saka unogona kugadzirisa iko kukanganisa nekumisikidza iyo giraidhi mutyairi. Ndokumbira utarise kune edu maitiro ekudzosera iyo giraidhi mutyairi mu Windows 10 tungamirai mazano-nhanho.
Solution 4 ye4
Unganidza yekutarisa kwekunze kune imwe chiteshi chekuratidzira
Kana yako PC iine akawanda madoko, edza kubatanidza iyo yekunze yekutarisa kune imwe chiteshi uye tarisa kana izvi zvinogadzirisa nyaya. Semuyenzaniso, patsanura kubva HDMI uye batanidza kuna DisplayPort.
Our mashandisiro ako Windows 10 Laptop seyechipiri cheki mutungamiri anogona kukufarirawo.
5 akanakisa ekubvisa mutyairi maturusi ekuona zvese zvadzimwa